Angawoota: Liyyuu Polis Harargee Dhiyaa fi Bahaa Keessatti Nama Torba Ajjesan – Kichuu
HomeAfaan OromooRadioAngawoota: Liyyuu Polis Harargee Dhiyaa fi Bahaa Keessatti Nama Torba Ajjesan
Faayilii – Liyyuu poolisii
WAASHINGITAN, DIISII — Godinaa Haragee Dhihaa fi Bahaa keessatti namonni har’a humna Liyyuu Poolisiin ajjeesaman 7 ga’an jechuudhaan jiraattonni fi aangawoonni naannoo gabaasanii jiran. Kanneen madaawanis ni jiran.
Godiina Harargee dhiyaa keessatti kaleessa galgala jiraattoota keessaa lama waraana Liyyuu polisiin ajjefamuu jiraatonnii fi aangawoonni ibsanii jiru.
Sana booda har’a ganamaa kaasee haleellaa itti fufuun namoota ka biroo afur liyyuu polis ajjesee kanneen biroo lama madeessuu isaa aangawonni naannoo ibsanii jiru.
Gama kaanii akkuma gidduu kana ta’aa ture har’a illee godina Harargee bahaa aanaa Fadis fi Baabbilee giddutti namnii tokko liyyuu polisiin ajjefamuu fi ka biraan tokko mada’uu aangawonni mirkaneessanii jiru.
Gaaffii Deebii gaggeeffame caqasaa
Kanneen Oromiyaa Keessatti Ajjeechaalee fi Yakka Biroo Raaw’tan irratti Tarkaanfiin Seeraa Fudhatamuu Qaba, Jedha Mootummaan Naannoo Oromiytaa
Embaasiin Ameerikaas Namoota Ajjeesamaniif Gadda Isaa Ibsee Jira
WAASHINGITAN, DIISII — (voaafaanoromoo) —Godinaa Harargee Bahaa, magaalaa Calanqoo keessatti haala gaddisiisaa uumame irratti kan ibsa kenne – mootummaan bulchiinsa naannoo Oromiyaa namoonni hiriira nagaa bahan ajjeesamuu isaanii fi 14 immoo madaa’uu dubbate. OBN yokaan Oromia Broadcasting Network-f ibsa ka kennan – Prezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa – Obbo Lammaa Magarsaa, “qaamonni gochaa kanaaf itti-gaafatamoo ta’an akka seeratti dhihaachuu qaban hubachiisan. Yunivarsitii Wallaggaa, mooraa Shaambuu keessatti haleellaa sab-lammii adda baasee geggeessamee kanneen raw’atanii fi barattoota bulchiinsa naannoo Tigiraay lama ajjeesan irratti tarkaanfiin seeraa barbaachisaan akka fudhatamu mirkaneessanii jiran. Ibsa Prezidaantichaa ilaalchisuudhaan, gabaasaa keenya – Eskindir Firew-f kan gaaffii fi deebii kennan – Itti-gaafatamaan waajira dhimmoota koomiyunikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa – Obbo Addisuu Araggaa — “Ahmeddin Ahmed Asaasaa namni jedhamu humna Liyyuu Hayil, ka bulchiisa naannoo Somaaleetiin ajjeesamuu isaanii tu, hiriira nagaa magaalaa Calanqootti geggeessame sanaaf sababaa tahe – jedhu. Tarkaanfiin hiriirtota irratti fudhatame garuu, gochaa sirrii miti – jechuudhaan, yaada prezidaantichaa ibsaanii jiran.
‘Naga-eegumsa fi tasgabii bulchiinsa naannoo tokkoo ilaalchisee, akka heera mootummaatti lafa kaayamee jiruutti, haalli nageenyaa yaaddessaa ta’ee humna naannoo tii ol ennaa tahu dha kan humni ittisa biyaa keenya yokaan poolisii fi humni naga-eegumsaa mootummaa federaalaa kan waamaman – ka jedhan – Obbo Addisuun, amma garuu, humni kun eenyuun akka waamame waan beekamu akka hin jirre dubbatu.
“Tarkaanfii kana eenyu akka ajaja, humna ittisa biyaa keenyaa eenyu akka naannoo sanatti waame waan beekamu akka hin jirre – kabajamoo prezidaantiin keenya ibsanii jiran” – jedhan – Obbo Addisuun.
Mootummaan naannoo Oromiyaa, akkka dhimma sana hordofuu fi kanneen yakka sana raaw’atan irratti akka tarkaanfiin seeraa fudhatamu hojjetu ibsanii jiran. Gana biraatiin, Yunivarsitii Wallaggaa – mooraa Shaamuu keessatti, haleellaa saba-lammiitti fuuleffatee geggeessameef kanneen itti gaafatamoo ta’an akka hatattamaan qoratamanii tarkaaniin seeraa fudhatamus hubachiisanii jiran, jedhan.
Gama biraatiin immoo, ka Finfineetti argamu Embaasiin Yunaayitid Isteets – ajjeechaalee magaalaa Calanqoo fi Yunivarsitiilee keessatti raaw’atamanitti gadduu isaa beeksisee jira. Maatiilee, namoonni isaanii jalaa ajjeesamaniifis akka ibsa gadda isaa ergu beeksisee jira. Maootummaan nageenya uummata isaa akka eeguu fi lammiwwan Itiyoophiyaas aadaa waliin jireenyaa baraoota dheeraa qabatanii waliin jiraatan kabajanii akka waliin dhaabatan gaafatee jira.
ኢሳት የዕለቱ ዜና፣ መከላከያ ሰራዊቱና ፖሊሶች ተኩስ በተለዋወጡት ተኩስ የአጋዚ ኃይላት